TakeshiCo Motorsport TK05MM1 – TakeshiCo
အထူးလျှော့ဈေး ၅ နှစ်မှတစ်ခါရှိတဲ့ဈေးနှုန်း
ပုံမှန်ဈေးနှုန်း 279,000 Ks.
ယနေ့မှာယူပါက 64,000 Ks.
1. လက်ပတ်နာရီ MotorSport (ဈေးနှုန်း 279,000 Ks)
2. ၁ နှစ်အာမခံကဒ် (အဖိုးတန်သောကဒ်)
တန် မှ တန် !
အရည်သွေးကောင်း ခိုင်ခံ့ နွားသားရည်စစ်စစ်မှပြုလုပ်ထားတဲ့လယ်သာကြိုး
အချိန်တိကျမှန်ကန် ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်အောင်ဂျပန်ဓာတ်ခဲဖြင့် ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါတယ်
အသေးစိတ် စနစ်တကျထုတ်လုပ်ထားတဲ့နာရီဖြစ်ပြီး အများတကာဝယ်ပတ်နိုင်အောင်လည်းထုတ်ထားပါတယ်
၀ယ်ယူပြီးနောက်ပိုင်း စိတ်ရောကိုယ်ပါကျေနပ်မှုရှိအောင်လည်း ၀န်ဆောင်မှု အပြည့်ရှိပါတယ်
သာလွန်ဆန်းသစ်တဲ့နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ နာရီ !
၀ယ်ယူသူ ဘယ်လိုသုံးသပ်ချက်ရှိကြသလဲ ? ကြည့်ကြစို့
ဒီနေ့ပဲ နာရီရောက်ပါတယ် အင်မတန်မှကျေနပ်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့နာရီကပုံထဲထက်လှတာ ကြိုးလဲကိုင်ကြည့်တာနဲ့လယ်သာကြိုးဆိုတာသိသာတယ်ဗျာ ဘော်ဒီဒိုင်ခွက်လက်ကောင့်အတော်ပဲ ဒါမဲ့နိုင်ငံခြားသားနဲ့ဆို နဲနဲသေးသွားမယ်ထင်တယ် Asia အတွက်ထုတ်ထားထင်တယ် အချိန်ကြည့်ရတာလဲတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ် ညပိုင်းလဲ LED မီးပါတယ် အကုန်အိုကေတယ် အမှတ်ပေးမယ်ဆိုရင် 10/10 ပဲဗျာ
Thu Ra AgTaunggyi
နာရီဘော်ဒီ အလေးကအတော်ပဲ ဘောဒီကငွေရောင်လက်နေတာပဲ တော်တော်လေးကိုလှနေတ်ယ် ဒီဇိုင်းက နီမဲ အချိတ်ကြည့်ရတာလဲအဆင်ပြေတယ် day date ဒိုင်ခွက်မှာတခါတည်းပါပြီးသားတော့ အန်ကိုက်ပေါ့နှိပ်ကြည့်စရာမလို့တော့ဘူး ကြော်ညာထားတဲ့တိုင်းပြိုင်ကားရဲ့အသက်ငွေ့လဲခံစားရပါတယ် နောင်သူနဲ့ထည့်လာတဲ့ဗူးလေးလက်ဆောင်ပေးဖို့အသင့်ပဲ ဒါကြောင့်သူငယ်ချင်းပေးဖို့ ဒုတိယလုံးလာဝယ်တာ တကယ်ကြိုက်မိလို့ပါ
ကျနော်က ပြိုင်ကားမောင်းသူတယောက်ပါ ပြိုင်ကားဆိုရင်ကြိုက်နေပြီးသားပါ ဒီနာရီနဲ့လာတွေ့တော့ထပ်ထိသွားတာပေါ့ နောက် Inspired ကအီတလီကားပြိုင်ကွင်းနဲ့ပိုပြီးထပ်ကြိုက်သွားပါတယ် အရောက်ရယ် ဒီဇိုင်းရယ် ကျနော့စတိုင်လ်နဲ့ကွက်တိပဲ ဝယ်တဲ့နေ့ကကောင်မလေးတွေ့တော့ဆူတော့မယ် ဈေးနှုန်းပြောပြတော့ အော ပြီးရော ha ha ha အားလုံးခြုံကြည့်လိုက်ရင် အိုကေတယ်ဗျာ နောက်သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကြော်ညာပေးပါမယ်
ကျနော်က ပုံမှန်ဆိုရင်စတီးလ်ကြိုးနဲ့ပံပတ်တယ် အခုတော့ကနော့ရည်းစားက ဒီနာရီဝယ်ပေကတည်းက ၂ လလောက်ရှိပြီး ဒီနာရီပဲပတ်နေတာ နောက်သူငယ်ချင်းတွေတွေ့တော့မေးကြတယ် ဘယ်မှာဝယ်လဲ ကြိုက်လို့ funtction ပိုင်းနဲ့တော့သိပ်မလုပ်ဖြစ်ဘူး အချိန်ပဲကြည့်တာများတယ် ကျနော့ဝတ်စားဆင်ရင်နဲ့အတင်ပြေနေတော့ ဒီလယ်သာကြိုးနဲ့ပဲအမြဲပတ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ ဒါမို့ Review လာလုပ်ပေးခဲ့တာပါ
Ag Kyaw ThetYangon
ဒီ Motor Sport ပတ်လာတာ6လလောက်ရှိပြီး အရင်ဆိုဒီ brand ပဲ Autopilot ဒါမဲ့အရင်လုံးကလက်တံတမျိုးတည်းပဲ ကောင်းပါတယ် ပတ်လာတာဘာပြသနာမှမတွေ့သေးဘူး အရည်အသွေးတော်တော်လေးကောင်းပါတယ် နောက်ဒီဇိုင်းက လက်တံ Analo နဲ Digital ပိုပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်က ထိုင်းကိုိခဏခဏသွားရတာမို့ လက်တံကိုမြန်မာအချိန် Digital ကိုထိုင်းအချိန်2နိုင်ငံအချိန်လုပ်ထားတယ် ဒီ Motor sport ကိုမှတ်ပေးရမယ်ဆိုရင် 9/10 အကယ်လို့စတီးလ်ကြိုးရရင် 10/10 ပဲဗျာ
ပုံမှန်ဈေး 279,000 Ks.